Chii chinonzi Ergonomic Wiricheya?
Karman Healthcare S-ergo Chairs anongopihwa neKarman Healthcare, zvichireva kuti hapana imwe kambani inotengesa Ergonomic Mawiricheya. kushandisa yedu S-Shape Seating System, isu tinopa chimiro chakasarudzika kune yedu mutsara weErgonomic Mawiricheya.
Macheya eErgonomic akasiyana sei?
Iyi mhando yehunyanzvi inopa akawanda mabhenefiti pamusoro peyakajairwa wiricheya yemawoko chigaro. Haingori chete kuti kumanikidzwa kunogoverwa zvakaenzana pamakumbo nekumashure, inopawo pekugara pakadzika uye inodzivirira kumberi kutsvedza.
Ergo angandibatsira sei?
Mukati meErgo Series, pane yakakura mhando yezvimiro uye zvakatemwa zvinoenderana nezvinodiwa zvemunhu. Ergonomic Mawiricheya inopa vashandisi vane huwandu hwakawanda hwehuwandu lightweight Mawiricheya iyo inobatsira vashandisi nezvido zvezuva nezuva. Zvimiro zvinosanganisira zvakakwirira simba mwenje uremu furemu, iyo inopetwa uye nyore kuchengeta, inofema anti-bhakitiriya, inobviswa, inorwisa-stain, uye muchina unogona kutsikwa. Iyo ergonomic pekugara furemu iyo inosanganisirwa, inopa yakawedzera kugadzikana, yakakura nzvimbo yegiravhiti inonzwa, zvirinani kugovera uremu uye zvakare inoderedza njodzi yekumanikidza maronda uye Musipinha kuipa
Zvimwe zveErgo maficha anosanganisira:
Ergonomic Mawiricheya ine S- Yakaumbwa Kugara